साउदीमा बुधबार झन्डै एक हजार कोरोना निको, नयाँ संक्रमित ६ सय -
साउदीमा बुधबार झन्डै एक हजार कोरोना निको, नयाँ संक्रमित ६ सय
अहिलेसम्म कोरोना निको हुनेको संख्या तीन लाख ४ हजार नाघ्यो
१ आश्विन २०७७, बिहीबार ०९:१७ । साउदी अरेबिया
साउदी अरेबियामा कोरोना भाइरसको संक्रमित घट्नेक्रम जारी छ । यसै क्रममा यहाँ बुधबार कोरोना भाइरस नयाँ संक्रमित ६२१ जना थपिएको प्रवक्ता डा.मोहम्मद अल अब्दुलीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । यहाँ कुनै बेला दैनिक ५५ सयभन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएको थियो । पछिल्लो दिन भने ६, ७ सयको हाराहारीमा नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
त्यसैगरी बुधबार साउदीमा कोरोनाको उपचार गरिरहेका ९८२ जना बिरामी मंगलबार घर फर्किएको प्रवक्ता डा. अब्दुलीले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म साउदीमा कुल तीन लाख ६ हजार ४ जना कोरोना भाइरस संक्रमित उपचारपछि निको भैसकेका छन् ।
बुधबार यहाँ कोरोनाको उपचार गरिरहेका ३१ जनाले ज्यान गुमाएको प्रवक्ता डा.अब्दुलीले बताए । उनका अनुसार हालसम्म यहाँ कोरोना भाइरसबाट कुल ४ हजार ३६९ जनाले ज्यान गुमाई सकेका छन् ।
बुधबारको अपडेट अनुसार कोरोना भाइरस नयाँ संक्रमितभन्दा उपचारपछि निको हुने ३६१ जना बढी छन् ।
१. लिम्बुवानमा भोलेन्टियर्सको प्रशिक्षण तथा छ्लफल